सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सको खुद बीमाशुल्क आर्जन रु. १.७४ अर्ब, नाफामा ४२.८३%को बढोत्तरी Bizshala -
सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सको खुद बीमाशुल्क आर्जन रु. १.७४ अर्ब, नाफामा ४२.८३%को बढोत्तरी
काठमाण्डौ। सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
समीक्षा अवधिसम्म कम्पनीले १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ। जुन गत वर्षको सोही अवधिसम्मको तुलनामा २०.३० प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिसम्म कम्पनीले १ करोड ४४ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो।
समीक्षा अवधिसम्म कम्पनीले लगानी, कर्जा तथा अन्यबाट हुने आयबापत १८ करोड ९ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ। गत वर्ष यही अवधिसम्म यस्तो आय ९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ थियो।
समीक्षा अवधिसम्म कम्पनीले २६ करोड ३ लाख रुपैयाँ खुद दाबी भुक्तानी गरेको छ। गत वर्ष यही अवधिसम्म कम्पनीले ८ करोड ५० लाख खुद दाबी भुक्तानी गरेको थियो। समीक्षा अवधिमा दाबी भुक्तानी २०६.०९ प्रतिशतले बढेको छ।
समीक्षा अवधिमा कम्पनीको खुद नाफा ४२.८३ प्रतिशतले बढेको छ। गत वर्ष यही अवधिमा ९ करोड ३६ लाख नाफा आर्जन गरेकोमा समीक्षा अवधिमा बढेर १३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बनेको छ।
कम्पनीको व्यवस्थापन खर्च बढेर २१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्ष यही अवधिमा कम्पनीको व्यवस्थापन खर्च १६ करोड ८२ लाख रुपैयाँमा सीमित थियो।
कम्पनीको जीवन कोषको आकार ६२.७८ प्रतिशतले बढेर ३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुुगेको छ। गत वर्ष यही अवधिमा जीवन बीमा कोषमा १ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ रहेको थियो।
गत वर्ष यही अवधिमा २० करोड ५३ लाख रुपैयाँ रहेको कम्पनीको जगेडा तथा कोषको आकार बढेर ३६ करोड ८१ लाख रुपैयाँको उचाइमा पुुगेको छ।
यो अवधिसम्म कम्पनीको कुल कायम रहेको बीमालेखको संख्या ४८ हजार २७१ रहेको छ। गत वर्ष यही अवधिमा यो संख्या ३४ हजार ६७६ रहेको थियो।
कम्पनीको वार्षिकीकरण प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) ८.९२ रुपैयाँ, पीई अनुपात ६०.३० गुणा र प्रतिसेयर नेटवर्थ १२०.३६ रुपैयाँ रहेको छ।
sanima life insurance company Q3 2078/79
रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको विशेष साधारणसभाबाट �
काठमाण्डौ । रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको विशेष...
सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सले डाक्यो विशेष साधारणसभा, यस्ता छन्
काठमाण्डौ । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले विशेष...
काठमाण्डौ । अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड ज्यापु समाज यलबीच बीमा जागरण...
‘सूर्या र ज्योति लाइफबीच मर्जर जाने प्रारम्भिक सम्झौता भएको
काठमाण्डौ। सूर्या लाइफ र ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले मर्जर...
प्रभु इन्स्योरेन्सद्वारा विशेष साधारणसभा आह्वान, मर्जरमा
काठमाण्डौ । प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेडले विशेष साधारणसभा डोकेको...
सूर्या र ज्योति लाइफबीच मर्जरमा जाने सम्झौता, चुक्तापुँजी ५
काठमाण्डौ । सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स र ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स...
काठमाण्डौ । स्थापनाकालदेखि निरन्तर बजार हिस्सा बढाउँदै आएको आईएमई...
एमडीआरटी वार्षिक मिटिङका लागि रिलायन्स लाइफका दुई अभिकर्ता
काठमाण्डौ । मिलिनियम डलर राउन्ड टेबल २०२२ को वार्षिक सभामा भाग लिन...